Maanso: Alle ka Cabsi | Maankaab.com
Maanso: Alle ka Cabsi
Madamaa aynu nahay dad Muslim ah,waxaa fiican in aynu waxbadan iska wacdina waxna isaga sheegno khaladaadka faraha badan ee aynu galayno inta aynu Aduunka joogno, iyo inaga oo markasta ilaabayna ama hilmaansanba in ay Jirto Aakhiro iyo xisaabtii Alleh in ay danbayso.
Maansadan la magac maxday Alla ka cabsi,waxaa tiriyey Abwankeenii waynaa ee qaaliga ahaa Yuusuf Roobleh Xirsi (Sandoon) Abwaanku waxa uu maansadan inagu tusayaa faa’iida darada ay Dunidu leedahay hadii laga leexdo jidkii iyo toobiyahii uu Rabbi u jeexay;taasi oo hadii ay dhacdo lagu naar mudanayo.
Waatan maansadii “Alle ka Cabsi.
Cimri noole wuu madhanayaa waayahaa cuna’e
Ninba ceelka uu sii qotuu ka cokanaadaaye
Allahayoow i celibuu yidhaa aan ku caabudo’e
Laa caynun ra’at lagu cabbiray caynad lagu sheego
Allaah ka cabso khayr waad cayimi laabta kuu cula’e.
W/C: Abwaan Yuusuf Rooble Xirsi (Sandoon)